Ukuzibandakanya, Ukugeza noma ukugeza
I-cabin yokugeza yesikhathi eside ibe yincenye efunwa ngaphakathi yangaphakathi yokugezela. Iqiniso liwukuthi umkhiqizo ongasetshenziswa ekamelweni elincane. Kodwa-ke, udinga ukuqonda ukuthi ungafaka kanjani kahle ukugeza. Ngokwemvelo, kuqala udinga ukuyikhetha. Ukuze wenze lokhu, udinga ukunquma uhlobo lomkhiqizo, ukuma kwalo, izinto zokwenza, kanye nobukhulu.
Uma ungazi ukuthi ungafaka kanjani ikamelo lokugeza, ungesabi le nqubo, ngoba kulula. Okokuqala, funda imiyalelo eningiliziwe ezayo nomkhiqizo. Bese unquma ukuthi i-cabin izokuma endaweni yokugeza noma eduze kwayo. Kungase kudingeke wenze izinguquko ezithile ekuhleleni kwegumbi. Ukuhlanganiswa komkhiqizo akulula, udinga nje ukuqinisekisa ukuthi ikiti liqukethe yonke imininingwane.
Ngakho, ngaphambi kokufaka ishawa, hlola zonke izakhi. Kumele ube nezinsimbi zensimbi kulesi kit, lapho uhlaka lwomkhiqizo, amapaneli ohlangothini kanye nodonga olungemuva (kuye ngokuthi isimo nesakhiwo sokwakhiwa), uphahla, umnyango, kanye nomzila lapho amanzi asetshenzisiwe azokwenziwa khona.
Ukuze ufake itekisi, kubalulekile ukuyihlanganisa kuqala. Ukwenza lokhu uzodinga isikebhe sokuvunguza, isitifiketi se-silicone, izimo eziguquguqukayo eziguquguqukayo, ishaja, i-mixer, umgodla, isibhamu sokwakha kanye nezinga.
Isinyathelo sokuqala ukuqinisa i-pallet. Ngokwemvelo, ngaphambi kwalokhu, zonke izakhi eziguquguqukayo ezibhekene nokunikezwa nokususwa kwamanzi zifakiwe. Indlela engcono kakhulu ukubeka i-pallet ngqo ngenhla engxenyeni yomkhumbi. Ungadinga izakhi ezengeziwe zokusekela. Ukufaka i-pallet kuyadingeka kwiglue qualitative noma i- grout grout. Ama-hoses for draining kufanele atholakale engxenyeni encane.
Okulandelayo, ngaphambi kokufaka ishayela ngokuphelele, hlanganisa uhlaka lomkhiqizo ozayo. Yenza lokhu ngokusetshenziswa kwesakhiwo sokwakha, ukuze kamuva ungabi nezinkinga ngokuvula noma ukuvala umnyango (ikakhulukazi uma ushayela). Ngemuva kwalokho, ungalungisa ama-panel namahlangothi.
Ukuze uthole ukulungiswa okwengeziwe, kungenzeka ukucubungula amalunga wezibuko ngefreyimu ne-silicone sealant, okuyi-insulator. Lungisa ngokuphepha amaphaneli ngezikulubo zokuzibamba, lapho izimbobo ezikhethekile ezihlinzekwa kuphrofayela.
Faka iwashi ngezandla zakho kulula, uma wenza konke ngokuhambisana nemiyalelo. Ngesikhathi somsebenzi, zama ukuqinisa izikrini ngaphandle kokucindezela ngokweqile, ngakho-ke ingilazi (ipulasitiki) noma iphrofayli yensimbi. Manje kusele nje kuphela ukufaka umnyango ngendlela efanele futhi ngokulinganayo, uphawu wonke amalunga bese ulinda ukuba i-silicone ikhuni.
Okokugcina, kufanele uhlole ukusebenza kweklabhu, ukukhanyisa, imisebenzi eyengeziwe, abaxube nabageza. Uma kunezinkinga, kumele ziqedwe. Manje uyazi ukuthi ungafaka kanjani isha. Inhlanhla!
Ulwandle usawoti kanye nendima yayo ekuphileni komuntu
Ukufakwa Kwekhwalithi Yezinsiza Zokuhlanzeka Ngokwemali Encane
Bhati for yokugezela encane: kufanele kube?
Yini engaba yizitsha zokugeza zokugeza
Uyini zezinzwa izicubu dysplasia
Njalo yesimanje kwekhanda "poluboks"
Eziguquliwe for lip nokwengezwa. Sucker for lip nokwengezwa: kanjani ukuyisebenzisa?